Ngubani filius Flitwick?
Lesi sihloko uzobe anikelwe omunye wothisha lesikole umlingo. Filius Flitwick - akuyona nje master of iziphonso, kodwa futhi Dean of Faculty of Ravenclaw.
Little mayelana esemncane futhi intsha Flitwick
Flitwick wazalelwa emkhayeni nabathakathi nge Goblin izimpande. Lokhu kungenxa kwesiqu yayo encane. Cishe, Wand yakhe yokuqala Wathenga e Diagon Alley, lapho eneminyaka engu-11 ubudala. Ekwabiweni Hogwarts esikoleni magic isigqoko ukucabanga cishe imizuzu emihlanu mayelana lapho ukuthumela umfana - e Gryffindor noma Ravenclaw. Okukhethayo sokugcina, wayeka ngesikhathi Ravenclaw. Ngemva kwesikhathi esithile, leli cala libe umthombo amahlaya esinenhlonipho phakathi Flitwick futhi yesikole Gryffindor. Phela, uma izikhathi juqu ebuntwaneni, babengakwazi ukuyisekela kalula kube ushintshanisiwe cha.
Thanda abafundi abaningi, naye wayenesithakazelo Gray Lady, lapho wafihla tiara unina. Nokho, kuyinto imfihlo yakhe akazange ukwethemba omunye umuntu. Okuwukuphela kwaba iNkosi Voldemort futhi Harry Potter. School filius Flitwick, ogama izithombe kungabonwa ngezansi, wathola iziqu ezifundweni ezinhle, wedlula Newt futhi OWL nge-honours. impumelelo Okuningi eye ku ukupela.
Ukufundisa at Hogwarts
ngonyaka elingaziwa uma filius Flitwick wathatha umsebenzi uthisha. Kodwa kusobala ukuthi has a lot of nakho emsebenzini wabo. Indlela yakhe yokufundisa nikubeke ezinhliziyweni zenu. Ngokwesibonelo, ngaphambi kukaKhisimusi eyodwa yezincwadi filius Flitwick (umlingisi - Uorvik Devis), bavunyelwe abafundi bakhe ukuze adlale magic of the game.
Uprofesa evuthiwe ukuncokola, futhi uthembekile zonke abafundi kungakhathaliseki khono. Akazange abeke izinhlawulo noma izingilazi amaphuzu uma kokuba sekwephuzile ekilasini. Enye osolwazi filius Flitwick uhlonishwa ngenxa yolwazi eside yabo, amakhono kanye nemvelo enobungane.
Flitwick kanye wafundisa abaphangi, u-Evans Lili Severus Snape. Wabuye wasinda empini yokuqala ne Ukufa Ekudleni, futhi, naphezu ezikhathini ezinzima, wasala Hogwarts.
Filius Flitwick. Ama-movie
Esikhathini sokuqala ifilimu okhiye enchanted filius Flitwick ukuvimbela imizamo uSolwazi Quirrell bamba itshe sefilosofi sika. Nokho, njengo Harry Ubamba ukhiye ofanele ngaphandle izinkinga ezinkulu.
Esikhathini ifilimu yesibili filius Flitwick akuyona ezibucayi. Lapho bafumana Justin bethukile futhi ghost of Gryffindor, uprofesa wayephakathi isixuku abafundi. Yena nomunye uthisha wasiza Justin isibaluli esibhedlela. Ekupheleni konyaka, lapho yabe seyaziwa ukuthi indlalifa Slytherin weba Dzhinni Uizli, uProfesa filius Flitwick yena wakhala.
Encwadini wesithathu filius Flitwick wathatha ingxenye engxoxweni, okuyindawo Harry Potter ngafunda ukuthi Sirius awuzange uthembeke abazali bakhe. Ngawo lowo nyaka, Flitwick afundisa ngayo abafundi bayo izintelezi oxide. Ekupheleni konyaka wabanjwa Sirius Black kukhiyiwe ehhovisi lakhe.
Encwadini wesine, Harry Potter UProfesa wafundisa izintelezi yiziphazamiso ezihehayo ukuthi kwamsiza emzuliswaneni wokuqala kulo mqhudelwano. Ngesikhathi Yule Ball Flitwick kuyinto iqembu labafundi ukuba "Sage". Phakathi umsebenzi wokugcina kulo mqhudelwano filius Flitwick wayengomunye walaba izulazula ku uxhaxha imilingo.
Encwadini yesihlanu Flitwick bayahlonishwa iziqhumane imilingo okuhleliwe amawele, namachibi amanzi esitezi sesithathu. UProfesa Harry futhi asekelwa emva kokukhululwa kwe umagazini "Meany" ngokumnika ibhokisi amagundane ushukela iso.
Encwadini wesithupha filius Flitwick, Snape ngashaqeka lapho weza emva kwakhe emgodini ngesicelo Minerva. Ubekhona futhi umngcwabi lesikole.
Naphezu kweqiniso lokuthi kule minyaka ifilimu umqondisi wesikole sekuyenzeka wazonda Severus Snape, omunye wothisha akuwenzanga kokuthunyelwe kwakhe. Filius Flitwick wahlala ukufundisa esikoleni Hogwarts, ukuze bakwazi ukuvikela abafundi babo. Njengezinye othisha, wahlanganyela impi esikoleni. Ubizwa bamatasa ekusizeni Order nothisha ukuvikela abafundi futhi ukubabulala Ukufa Ekudleni naseNkosini Dark.
izindima ezintathu Warwick Davis
Uorvik Devis - ungumuntu ababedlala UProfesa Flitwick Harry Potter namafilimu. Kodwa bambalwa abantu bazi ukuthi British umlingisi-yemifino ukudlalwa omunye nemikhovu ezimbili - Ukuphatha yasebhange imilingo Gringotts futhi Griphook. In the version Russian kwezwi lakhe Kolgan Aleksey.
Uorvik Devis is hhayi nje njengomuntu umlingisi onekhono, kodwa futhi njengendlela producer, umqambi futhi umbhali wemidlalo eyaziwa.
I Thriller ngokwengqondo "Ukuthatha Ukuphila." Abalingisi kanye izindima ukuthi izilaleli bathandile, ukuba dream of a umbukwane ashukumisayo
Idokhumentari imikhosi ifilimu in Russia
Yini okufanele ibe lwemidlalo ophahleni ukuze ophahleni ongaphakeme: izithombe kanye namathiphu
Indlela nemingenela e iDanube eziningi - niyokwazi ngokuqinisekile
Fast ukupheka pizza ekhaya: iresiphi